Yakatumirwa ne Tranquillus | Apr 25, 2020 | hofisi
Iwe wakambonzwa nezveMicrosoft Outlook. Iyo inonyanya kushandiswa kutumira uye kugamuchira mameseji. Asi iye anopawo manejimendi yekarenda yake uye rake mabasa emazuva ese. Chinhu chinobatsira kwazvo kuwana mukugadzirwa. Asi hazvina mukurumbira nekuda kweizvozvo chikonzero chete. Chiverengero chakati chemakona chaiwo akasarudzika a bhokisi retsamba rinotungamirirwa ne pro cheizvo zvinotarisirwa nemudzidzi. Izvi ndizvo chaizvo izvo Outlook inobvumidza iwe. Dhiraivha bhokisi rako tsamba nenzira younyanzvi. Kana iwe usingade kuve iwe unotora maawa matatu uchitsvaga meseji, bvisa. Uyo asingapinduri kwemazuva gumi nemashanu nekuti pazororo. Saka, ziva kuti kana iwe uine Outlook yaunayo, une chishandiso chakasimba kwazvo chaunacho.
Ronga rako rebhokisi rezvinyatso nyorwa ne Outlook
Iwe unogona kutaura pasina chero ani zvake achikwanisa kupokana newe, kuti iwe unokwanisa kutonga rako bhokisi seyakanyanya kana:
Email yega yega inosvikako iwe wozoigadzirisa mugwaro mukukosha mune yakatarwa dhairekodhi kana Sub-folders.
Iwe une bhatiri remunhu template matemplate akagadzirira kushandisa kana mamiriro akafanana akamuka.
Iwe unogadzirisa kutumira kweiyo otomatiki mhinduro kune chero munhu anokunyorera iwe pazororo rako kana chero imwe nyaya yekusavapo kwechinguvana.
Kuti maimeri ako ese anoperekedzwa neako yako yemagetsi siginecha nemucherechedzo wekambani yako.
Kana iwe usipo, iwe unofanirwa kukurumidza kuchinja mashandiro aunoita. Iwe unogona kuzvimisa zvese nekukurumidza pasina icho chiri kuita chakaoma kunzwisisa sezvazvinoita. Iwe unongofanirwa kutanga uye nekukurumidza zvikuru iwe uchaona izvo zvakavanzika zvakawanda zveOutlook. Kunyanya kana zvasvika pakuronga karenda yako, kana kukuyeuchidza iwe nezve mamwe mabasa ekuita. Sangano remisangano, misangano, mafaera kuvhara pane yakatarwa date. Muzviitiko zvese izvi Microsoft Outlook ichave inobatsira zvikuru.
VERENGA Excel Mazano Okutanga Chikamu-Kukonzera Kubudirira Kwako
Tora kutonga kweAptlook 2013 neiyi yakazara dzidziso
Mune ino yemahara kudzidziswa iwe unotora nhanho-nhanho ongororo yezvinhu zvese zvinoumba Outlook. Hapana kupokana, yega yega yemavhidhiyo makumi mana nemana inogara maminetsi mashanu. Iwe wakasununguka kuzviona zvese kana kutarisa chete pane izvo zvinokufadza. Zvese zvidzidzo izvo zvinokutendera iwe kuti ukurumidze kudzidza software zvakafukidzwa. Kugadzirwa kwemafolda, otomatiki kuchengetedza emaimeri, nedudziro seinobatsira kana isingadiwe. Kugadzira otomatiki mameseji uye siginecha yako. Basa rekugadzirisa, kalendari manejimendi uye musangano musangano.
Chii chitsva muAptlook 2016
Kana iwe watove wakadzidziswa pane yegore ra2010 kana 2013, hauzovhiringidzika pa iyo 2016 vhezheni. Isu tinokwanisa kunyore kutsvaga kwekuvandudzwa nekuwedzera kweiyo runyorwa hwezvinhu zvekupedzisira zvakagamuchirwa sechisungo. Izvi zvakare zvinokutendera kuti iwe ugokurumidza kuzviisa ivo mukati meseji iri kunyorwa. Cherechedzawo, mukana wekugadzirisa makarenda akati wandei panguva imwe chete. Hapana chinonyanya kushamisa.
Chii chitsva muAptlook 2019
Hapana shanduko pakutaridzika kwesoftware, asi nhau dzinonakidza. Bhokisi rako retsamba ikozvino rine maviri tabo: rimwe rekutanga mail uye rechipiri kune mamwe ese. Zvakare kutarisirwa, iko kugadzirisa kweinowanikwa yekutarisa pamwe nemukana wekuteerera aya maemail. Pasina kutaura kudzoreredzwa kweiyo isina kuverengerwa mhando uye mafirita sarudzo pamusoro peiyo mameseji runyorwa.
VERENGA Nzira Yokushambidza Nayo Twitter Profile uye Kuchengetedza Mifananidzo Yako?
1 Isa iyo Outlook 2013 Outlook 2013 email account
2 Wedzera wechipiri Outlook 2013 account Outview 2013
3 Gadzira otomatiki mhinduro maonero 2013 maonero 2013
4 Set up yekusavapo meseji yekutarisa 2013 kubuda 2013
5 Chinja maitiro ekutsvaga ekutsvaga 2013 outview 2013
6 Manage folders imap outview 2013 chitarisiko 2013
7 Manage Outlook 2013 Outlook Outlook 2013 masiginecha
8 Pindura uye tumira email yekutarisa 2013 zvionekwe 2013
9 Kurwisa spam maonero 2013 maonero 2013
10 Tsanangura spam emails maonero 2013 maonero 2013
11 Wedzera wedzerai RSS feed 2013 maonero 2013
12 Tumira email kune akati wandei akatarisana 2013 zvionekwe 2013
13 Kudhinda meseji kubuda 2013 kubuda 2013
14 bohlokoa zvinhu zvakasiyana Outlook 2013 Outlook 2013
15 Delete Outlook 2013 Outlook 2013 Messages
Gadza bhokisi rako rebhokisi sebhokisi remumhanzi Kubvumbi 26th, 2020Tranquillus
pashureMhando yepamusoro yekuremekedza maemail ako
zvinoteveraNzira yekufambisa sei mabhesiki akakosha muMicrosoft Word?
Nzira Yokushambidza Nayo Twitter Profile uye Kuchengetedza Mifananidzo Yako?